Home Wararka Hay’adda gargaarka USAID oo oo kaalmo ugu deeqaday UNICEF Soomaaliya
Hay’adda gargaarka USAID oo oo kaalmo ugu deeqaday UNICEF Soomaaliya
Waxaa muuqata in beesha caalamka ayan wali aamin ku qabin in ay lacag si toos ah u siiyo xukuumada waqtigeeda dhamaaday. Hay’adda USAID ayaa $ 20 milyan oo dheeraad ah ugu deeqday Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay (UNICEF) ee Soomaaliya si looga caawiyo la-dagaallanka cudurka faafa ee COVID-19.
Kaalmadani cusub waxay keenaysaa maalgelinta USAID ee UNICEF Soomaaliya in ay gaartay $ 34.7 milyan sannadka 2021. Waxay kaalin wayn ka qaadan doontaa taageeridda ururka iyo la-hawlgalayaasheeda si kor loogu qaado awoodda maxalliga ah loona xoojiyo adkaysiga bulshooyinka iyo nidaamyada wax-ka-qabashada COVID-19 masiibada iyo dhibaatooyinka kale ee dalka horyaalla.
“Maaliyaddan cusub ma aha oo kaliya in ay gacan ka geysaneyso yareynta saameynta masiibada, laakiin waxay sidoo kale xoojin doontaa ilaalinta carruurta ee adeegyada, caafimaadka, nafaqada, iyo sidoo kale bixinta biyo nadiif ah iyo fayadhowr wanaagsan.”
Hay’adda USIAD waxay sheegtay in maaliyaddan cusub aysan kaliya gacan ka geysaneyn yareynta saameynta masiibada Covid19, laakiin waxay sidoo kale xoojin doontaa ilaalinta carruurta, caafimaadka, iyo adeegyada nafaqada, iyo sidoo kale bixinta biyo nadiif ah iyo fayadhowr wanaagsan, ayaa lagu yiri warbixinta.”